सिकाई टेक्नोलोजी सीआरएम प्रबन्धकको रूपमा आलोचनात्मक छ: यहाँ केहि संसाधनहरू छन् Martech Zone
तपाईंले किन सीआरएम प्रबन्धकको रूपमा प्राविधिक सीप सिक्नु पर्छ? विगतमा, एक राम्रो हुन ग्राहक सम्बन्ध प्रबन्धक तपाईलाई मनोविज्ञान र केहि बजार कौशल चाहिन्छ।
आज, CRM मूल भन्दा धेरै प्रविधि खेल हो। विगतमा, एक CRM प्रबन्धक कसरी ईमेल प्रतिलिपि सिर्जना गर्ने बारेमा बढी केन्द्रित थियो, एक अधिक रचनात्मक दिमागको व्यक्ति। आज, एक राम्रो सीआरएम विशेषज्ञ एक ईन्जिनियर वा डेटा विशेषज्ञ हुन् जसले सन्देश टेम्प्लेटहरू कस्तो देखिन्छन् भन्ने बारे आधारभूत ज्ञान छ।
स्टिफेन हार्टिंग, Inkitt को CMO
आजकल, CRM पूरै फरक खेल हो। मापनमा मार्केटिंग निजीकरण प्राप्त गर्न प्रत्येक CRM प्रबन्धकले तीन क्षेत्रहरू मास्टर गर्नुपर्छ। यसमा डेटा एनालिटिक्स, प्रणाली एकीकरण, र मार्केटिंग टेक्नोलोजी टूलकिट (र यस क्षेत्रका वर्तमान बजार खेलाडीहरूको अवलोकन) समावेश छन्।
यसका लागि प्रविधि सम्बन्धी धेरै हदसम्म ज्ञान चाहिन्छ। तपाईं प्राप्त गर्न चाहानु भएको मार्केटिंग निजीकरणको बढि फाइन-ग्रेन्ड स्तर, तपाईंलाई कल्पना गर्न आवश्यक छ अधिक उन्नत प्रयोगहरू।
उन्नत निजीकरणमा सँधै वितरित प्रणालीहरूबाट डाटाको उच्च भोल्युमहरू सँगै राख्नु समावेश गर्दछ। यसैले मार्केटिंग अटोमेसन विशेषज्ञले यी प्रणालीहरूले कसरी एक अर्कामा कुरा गर्छन् र कसरी डाटा भण्डारण र संक्षेप हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्दछ।
पछिल्ला years बर्षमा, CRM व्यवस्थापकहरू हामीले भेट्यौं विभिन्न सफ्टवेयर समाधानहरू (ग्राहक सage्लग्नता प्लेटफर्महरू, ग्राहक डाटा प्लेटफर्महरू, पदोन्नति प्रबन्धन प्रणालीहरू, आदि) र दैनिक एक वा बढी विकासकर्ता टोलीहरूसँग काम।
हामीले डिजिटल टोलीलाई विकासकर्ता र मार्केटरहरु बीचको टोपी गाड्न अहिले years बर्षमा मद्दत गर्दैछौं र सयौं ग्राहकहरुलाई जहाजमा लगिसकेपछि हामीले के याद गरेका छौँ कि सफल मार्केटर वा सीआरएम प्रबन्धक नै टेक्नोलोजी बुझ्ने मानिस हुन्।
टेक्नोलोजीको बारेमा जति धेरै तपाईंलाई थाहा छ, त्यति नै तपाईं आफ्नो काममा कुशल हुन सक्नुहुन्छ।
प्रविधि सीआरएमको मुटुमा रहेको छ।
एन्थोनी लिम, पोमेलो फेसनमा सीआरएम प्रबन्धक
यदि तपाइँ सफ्टवेयरले कसरी काम गरिरहनु भएको छ भनेर बुझ्नुहुन्छ भने, यसको संभावनाहरू, र यसको सीमाहरू, तपाईं यसको क्षमता अधिकतम गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईंलाई थोरै विकासकर्ता लिंगो पनि थाँहा छ भने, टेक टीमसँग तपाईंको आवश्यकताहरूको व्याख्या गर्न र छलफल गर्न सजिलो हुन्छ। नतिजामा, विकास टोलीसँगको कुराकानी बढी प्रवाही हुन्छ र उनीहरूको काम बढी कुशल हुन्छ। राम्रो संचार अन्तिम कोडको छिटो डेलिभरी र कम समय र संसाधनहरूको अपशिष्ट बराबर हुन्छ।
यदि तपाईंलाई SQL वा पाइथनको थोरै थाहा छ भने, तपाईं केही समय बचत गर्न सक्नुहुनेछ र आधारभूत डाटा क्वेरिहरू आफैं चलाउन सक्नुहुनेछ। यो उपयोगी हुन सक्दछ, विशेष गरी यदि तपाईंलाई केही हदको आवश्यक छ र तपाईंको विकासकर्ताहरू एउटा स्प्रिन्टको बिचमा छन्, र तपाईं तिनीहरूलाई स to्कष्ट गर्न चाहनुहुन्न। आफैले चीजहरू गर्दा तपाईंको लागि डाटा विश्लेषण प्रक्रियाको गति बढ्न सक्छ र तपाईंको विकासकर्ताहरूले उनीहरूले डेलिभर गर्नु पर्ने ठूला कार्यहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छन्।
टेक जान्ने सीआरएम प्रबन्धकहरूको लागि अब कुनै भिन्नता छैन; यो आधारभूत आवश्यकता भयो।
सीआरएम प्रबन्धकको रूपमा तपाईले कुन टेक सीप सिक्नुपर्दछ?
तपाइँले केही मुख्य अवधारणाहरू थाहा पाउनुपर्दछ:
डाटा भण्डारण - कसरी डाटा भण्डारण गरिएको छ, एक रेकर्ड के हो, डाटा मोडेल के हो, र तपाईंलाई स्किमाको आवश्यकता किन छ? डाटा माइग्रेसन कहिले आवश्यक हुन्छ, र यसको लागत कसरी अनुमान गरिन्छ?
प्रणाली एकीकरण - तपाइँलाई कसरी जान्नुपर्दछ कि कसरी डेटा एक डेटा भण्डारणबाट अर्को काममा सार्ने डाटालाई तपाइँको विकासकर्ता टोलीसँग योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सक्षम हुन।
विश्लेषण - सर्भर र वेबमा ग्राहक ट्र्याकिंगको आधारभूत।
पुन: लक्षित - विज्ञापन retargeting र यो कसरी काम गर्दछ।
मार्टेक टूलकिट सिंहावलोकन:
तपाईंले नियमित रूपमा मार्केटिंग टेक्नोलोजी प्रदायकको रोडम्याप र रिलीज तालिका जाँच गर्नुपर्नेछ। तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ कि सम्भावनाहरू के हुन् र तपाईंको हालको स्ट्याक सही छ वा छैन। टेक्नोलोजी विकसित हुँदै जाँदा, त्यस्तै सुविधाहरू (र मूल्यहरू) विभिन्न सफ्टवेयर प्रदायकहरूका हुन्।
पछिल्लो वर्ष के राम्रो थियो यस वर्ष सबै भन्दा राम्रो फिट हुन सक्दैन, या त किनभने तपाइँको आवश्यकताहरू परिवर्तन भएको छ वा किनभने त्यहाँ अधिक विकल्पहरू उपलब्ध छन् वा राम्रो मूल्य समान सुविधा सेटको लागि उपलब्ध छन्। तपाईको स्ट्याक्सलाई अप्टिमाइज गर्न तपाई नयाँ बजार र नयाँ प्रदायकको शीर्षमा रहनु पर्छ।
जहाँसम्म तपाईं आफैंले आफ्नो स्ट्याक बनाउनुभएको छ, तपाईं नयाँ सुविधाहरूको लागि प्रेरणा खोज्दै हुनुपर्दछ वा तेस्रो-पार्टी विक्रेतामा स्विच गर्न पुन: विचार गर्नुपर्दछ यदि बजारमा मूल्यहरू खस्छन् र यो तपाईंको सफ्टवेयर समाधान कायम राख्न र अपग्रेड गर्न लाभदायक हुँदैन।
SQL र / वा पाइथनको आधारभूत:
डाटा विश्लेषणका लागि प्रयोग हुने यी महत्त्वपूर्ण भाषाहरू हुन् जसले तपाईंलाई विकासकर्तालाई मद्दत नगरी प्रश्नहरू आफै चलाउन सक्षम गर्दछ। आधारभूत कुराहरू सिक्दा तपाईंको विकासकर्ताहरूसँग कुराकानी गर्न पनि मद्दत गर्दछ।
तपाईं टेक सीपहरू कहाँ सिक्न सक्नुहुन्छ?
तपाईंको टोली - यो अन्ततः तपाइँको कम्पनी मा जानकारी को सर्वश्रेष्ठ स्रोत हो। तपाईंको विकासकर्ताहरूले तपाईंसँग टूलकिटको बारेमा धेरै जान्दछन्, साथै केही विकल्पहरूको बारेमा पनि। जबकि त्यहाँ बाहिरको नयाँ टेक्नोलोजीहरूको बारेमा उनीहरूलाई थाहा नहुन सक्छ, तिनीहरूसँग निश्चित रूपमा सबै आधारभूत अवधारणाहरू थाहा छ जुन उनीहरूसँग काम गर्न तपाईंले जान्नुपर्दछ। खुला हुनु र प्रश्नहरू सोध्नु तपाईंको गतिमा चाँडो ल्याउँदछ, विशेष गरी यदि तपाईंले भर्खरै यो स्थितिमा (वा यस कम्पनीमा) काम गर्न सुरु गर्नुभयो।
गाईड डाउनलोड गर्नुहोस्
पुस्तक - यो पुरानो जमानाको लाग्न सक्छ, तर त्यहाँ सीआरएम र सीआरएम सफ्टवेयरको बारेमा आधारभूत कुराहरू सिक्न त्यहाँ केहि राम्रा किताबहरू छन्। यो नि: शुल्क विकल्प हुन सक्छ यदि तपाईंले पुस्तकालय पाउनुभयो भने (विश्वविद्यालय लाइब्रेरीहरू जाँच गर्नुहोस्, विशेष गरी व्यावासायिक विश्वविद्यालय वा मार्केटि or वा आईटी विभागहरूमा)। यदि होईन भने, यदि तपाईंसँग किन्डल सदस्यता छ (हाल संयुक्त राज्य अमेरिकामा उपलब्ध), तपाईं सीआरएम शीर्षकमा केही पुस्तकहरू लिन सक्नुहुनेछ साथै तपाईंको सदस्यता योजना भित्र।
ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापन: अवधारणा र टेक्नोलोजीहरू
CRM पुस्तिका: ग्राहक सम्बन्ध प्रबन्धन को लागी एक व्यवसाय गाईड
सीआरएम लाइटको गति, चौथो संस्करण: सामाजिक सीआरएम २.० रणनीति, उपकरणहरू, र तपाईंको ग्राहकहरूलाई संलग्न गराउनको लागि प्रविधिहरू।
ब्लग - त्यहाँ धेरै ब्लगहरू छन् ग्राहक सम्बन्ध प्रबन्धन (CRM) प्रविधिहरूलाई समर्पित। यहाँ मेरा मनपर्नेहरू छन्:
Martech Zone - सीआरएम
क्याप्ट्रा द्वारा शीर्ष CR सीआरएम ब्लगको सूची
अनलाइन पत्रिकाहरू - अनलाइन म्यागजिनहरू कतै ब्लग र पुस्तकहरूका बीचमा हुन्छन्, जानकारीको एक टन प्रदान गर्दछ र साथै प्रमुख प्रविधि प्रदायकहरू सहित।
२०० ओके सीआरएम प्रबन्धकहरूलाई मद्दत गर्न मद्दत Voucherify.io द्वारा बनाईएको एक पत्रिका हो आवश्यक टेक सीपहरू। यसमा नयाँ टेक्नोलोजी र टेक्निकल अवधारणाको बर्णन गर्ने लेखहरू हुन्छन्, कम-न-कोड उपकरणका केसहरू प्रयोग गर्नुहोस् जुन सजिलै गैर-विकासकर्ताहरूले प्रयोग गर्न सक्दछन्, उद्योग विशेषज्ञहरूसँग अन्तर्वार्ता लिन्छन् जसले कसरी आवश्यक सीपहरू कसरी सिक्ने भन्ने बारेमा टिप्स र युक्तिहरू साझा गर्छन्। भूमिका।
अनलाइन कक्षा - यो विशेष गरी उपयोगी छ यदि तपाईं कोडिंगको आधारभूत कुरा जान्न चाहानुहुन्छ भने, एसक्यूएल, वा पाइथन वर्गहरू तपाईंको पहिलो छनौट हुनुपर्छ। त्यहाँ ट्याप गर्न धेरै स्वतन्त्र स्रोतहरू छन्।
मार्केटरहरूको लागि SQL ट्यूटोरियल
SQL प्रयास गर्नुहोस्
Skillshare - एक शिक्षा र साझा प्लेटफर्म, एक नि: शुल्क परीक्षण प्रदान गर्दछ।
EDX - एक अनलाइन शिक्षा प्लेटफर्म को दुनिया को सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयहरु द्वारा प्रदान को सित्तै धेरै कक्षा संग।
डाटाक्याम्प - पाइथन कोर्स।
सफ्टवेयर समीक्षा वेबसाइटहरू:
ग्राहक अनुभव म्याट्रिक्स - पूर्ण CRM प्लेटफार्म समीक्षा।
क्याप्टर्रा, GetApp, G2 क्रोड - मार्केटिंग टेक्नोलोजी सहित विभिन्न सफ्टवेयर उपकरणहरूको समीक्षा।
पोडकास्टहरू - यदि तपाईं आफ्नो कम्युटमा केही सुन्न चाहनुहुन्छ वा तपाईंको बिहान कफी पिउँदा, पोडकास्टहरू उत्कृष्ट छन्! तपाईं केहि जान्न सक्नुहुन्छ र अतिरिक्त समयको आवश्यकता बिना तपाईंको क्यारियरलाई अगाडि धकेल्न सक्नुहुन्छ।
CRM MVP पोडकास्ट
सीआरएम टक पोडकास्ट
कागजातहरू पढ्दै - तपाईं बिभिन्न उपकरणहरूको कागजात पढेर धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईं प्रयोग गर्नुहुन्छ वा प्रयोगमा विचार गर्न सक्नुहुन्छ। केहि समय पछि, तपाईं उनीहरूबाट धेरै विकासकर्ता-विशिष्ट शब्दावली पनि सिक्नुहुनेछ।
ट्रेलहेड - सेल्सफोर्सबाट अनौंठो नि: शुल्क संसाधन अनलाइन हो।
जुनसुकै स्रोत जुन तपाईंसँग सिक्न चाहानुहुन्छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुरु गर्नु हो। तपाइँका साथीहरूसँग कुरा गर्नुहोस्, तपाइँको विकासकर्ताहरूसँग कुरा गर्नुहोस्, चीजहरूको टेक्नोलोजिकल पक्षसँग नडराउनुहोस्।
Voucherify.io एक all-in-One एपीआई-प्रथम पदोन्नति प्रबन्धन सफ्टवेयर हो जुन एकीकृत गर्न न्यूनतम विकासकर्ताको प्रयास आवश्यक पर्दछ, को-आउट-अफ-द-बक्स सुविधाहरू र एकीकरण प्रदान गर्दछ, र मार्केटिंग टोलीहरूलाई छिटो सुरूवात र प्रभावकारी ढंगले कुपन व्यवस्थापन गर्न सक्षम बनाइएको छ। उपहार कार्ड पदोन्नतिहरू, सस्ताहरू, सिफारिश, र लोयल्टी प्रोग्रामहरू।
प्रकटीकरण: Martech Zone यस लेखमा सम्बद्ध लिंकहरू छन्।
टैग: २ ठिक छविश्लेषणक्याप्टराक्याप्टराचीफमार्कसीआरएमप्रकाशको गतिमा सीआरएमcrm पुस्तकहरुसीआरएम गाईडहरूसीआरएम पुस्तिकासीआरएम प्रबन्धकसीआरएम प्रबन्धक जिम्मेदारिहरुcrm mvp पोडकास्टcrm कुरा पोडकास्टसीआरएम टेक्नोलोजीcrm वेबसाइटहरुग्राहक अनुभव म्याट्रिक्सग्राहकसंगको सम्बन्ध व्यवस्थापनडाटा एनालिटिक्सडाटा भण्डारणdatacampगन्तव्य सीआरएमईडीएक्सg2 भीडgetappइंकिटमार्टेकपोमेलो फेसनअजगरपुनरागमनकौशल साझाsqlsteffen चोटप्रणाली एकीकरणटेक्नोलोजी आधारभूतप्रमाणित गर्नुहोस्